Birta mesh dahaarka leh Glass Muraayada Muraayad Amni?
Muraayadda birta ah ee birta lagu duubay waa nooc ka mid ah muraayadda dahaarka leh oo leh shabaq ama sax mesh silig ganaax ah oo galaaska ku jira. Iyada oo ku saleysan awoodeeda wanaagsan ee u adkaysiga dabka, muraayadda fiilooyinka leh ayaa laga bilaabay in laga isticmaalo Mareykanka, waxaana loogu talagalay inay iska caabbiso kuleylka iyo durdurrada tuubbada. Tani waxay ka dhigaysaa muraayadda fiilada leh marka hore ...
Farqiga U Dhexeeya Flex Flex Mesh Fades & Flex Flex Meven Wire Mesh Facades
Macaamiil badan ayaa weydiinaya waxa ku saabsan farqiga u dhexeeya dhaldhalaalka birta birta ah ee birta lagu duugo & Dharka dhoobada ah ee loo yaqaan 'Crimped Woven Wire Mesh facade'. Xaqiiqdii, labada nooc ee mesh silig bir ah ayaa asal ahaan isku mid ah xagga shaqada. Waxaa guud ahaan loo isticmaalaa duubista derbiga dibedda ama qurxinta gudaha ...
Faa'iidooyinka Saqafka Birta Mesh
Mesh birta saqafka la laalay, sidoo kale loo yaqaan mesh silig bir ah oo la isku qurxiyo (mesh silig mesh) ayaa laga sameeyay bir bir ah ama fiilo bir ah, oo leh qaab dhar kala duwan oo dusha sare ah, saqafka mesh birta wuxuu helayaa waxqabadka & qurxinta labadaba. Iyada oo ku saleysan qaabab kala duwan oo tolmo ah, qaabka birta birta ...